SmCo magnets a - China Ningbo Sine
SmCo magnets a vari rudzi yechipiri zvisingawanzoitiki pasi zvachose magnets a, munhu mukuru-kukwanisa yechigarire magineti yaigadzirwa Small, Co, Fe nevamwe chero simbi zvinhu. Kunze munhu Max vachishanda tembiricha kuti 300 ℃, ane kunoshamisa nemishonga pamusoro ngura uye oxidation. Saka, zvinogona kushandiswa aeronautic uye nzvimbo Mazinga aomng vamwe. Manufactures SmCo5 uye Sm2Co17 magnets a mu-siyana. nevatengi vakawanda zvinoda mamakisi YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, etc. machine uye tolerances We ...
SmCo magnets a vari rudzi yechipiri zvisingawanzoitiki pasi zvachose magnets a , munhu mukuru-kukwanisa yechigarire magineti yaigadzirwa Small, Co, Fe nevamwe chero simbi zvinhu. Kunze munhu Max vachishanda tembiricha kuti 300 ℃, ane kunoshamisa nemishonga pamusoro ngura uye oxidation. Saka, zvinogona kushandiswa aeronautic uye nzvimbo Mazinga aomng vamwe.
Manufactures SmCo5 uye Sm2Co17 magnets a mu-siyana. Nevatengi vakawanda zvinoda mamakisi YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, etc.
Machine uye tolerances
Tinowana ndeiya yakaita kukura uye achishivirira zvamakaparadza kana vachikuya Super abrasives. Samarium cobalt (SmCo) hazvigoni zvakohwewa pamwe kwakajairika kuchera, akatendeuka kana azvikuya pezvakaitwa, uye zvinofanira machine psac vasati magnetized. Uyezve, magungano makuru kana kunzwisisa anowanzoshandurwa magnetized asati gungano. Standard tolerances nokuti Samarium cobalt magnets a vari +/-. 005 "nokuti pasi miganhu. We mumatanda SmCo magnets a ari mufurati, mhete uye Disc chimiro zvakasiyana-siyana hukuru uye mamakisi, uye isu takashongedzerwa zvakakwana vabereke kukura uye kushivirira kuti inoda.
1: 5 chiwanikwa zvinhu
1: 5 inopa 16 MGOe (simba chigadzirwa) kusvika 22 MGOe uye rinoumbwa dzinenge 50% samarium uye 50% cobalt. The 1: 5 dzakatevedzana ane vaifanira yakarumbidza uchishandisa tembiricha 250 ° C. SmCo 1: 5 magnets a zvinoda nechepazasi munda zvinokwaniswa pane 2:17 zvinhu magnetize. Mune zvimwe zviitiko, 1:15 zvinhu anogona magnetized multiple namatanda, akapa kuti magnetizing yechigarire iripo.
2:17 chiwanikwa zvinhu
2:17 inopa 24 MGOe kusvika 32 MGOe uye rinoumbwa vanenge 25% samarium, 5% mhangura, 18% simbi, 2% hafnium kana zirconium, pamwe zvasara yokuva cobalt. The 2:17 akatevedzana ane kunonyanyisa uchishandisa tembiricha 350 ° C. Special mamakisi ose 2:17 dziripo izvo zvinogona kushanda kuti kunyange tembiricha yakakwirira. SmCo 2:17 inoda zvikuru yakakwirira magnetizing minda, uye vakawanda danda magnetization hazvibviri.
Open uye kukopa Technical Data pamusoro SmCo magnets a
Hwaro Magnetic Property
SmCo magnets A VS Sintered Neodymium magnets a
Hwaro Magnetic Property:
Maximum anoshanda tembiricha: 250-350 ° C
Induction Coercive Force: (Hcb) 4-12 (lehmä )
residual remagineti: Br 0.8-1.2 (T)
Reversible tembiricha coefficient pamusoro residual remagineti (Br) -0.04 - -0,01
2. Nice tembiricha nokutsiga
3. Nokuda kuti mutengo aikanganiswa pamusoro cobalt, mutengo wayo inodhura uye nyore-chinja
Production Process pamusoro Samarium cobalt Permanent Magnet:
Powder muitiro → Kuenderera → Sintering → Magnetic pfuma bvunzo → nokuveza → dzapedza zvigadzirwa
Samarium cobalt zvokuvakisa anowanzonzi kupatsanurwa mumamiriro ezvinhu dzisiri magnetized, pamwe nedhaimani gaya vhiri uye akanyorova yakaisvonaka nokugeda, inova zvakakodzera. Nekuti yakaderera kuvesa tembiricha, samarium cobalt haafaniri yaoma. Just sesasaradzi diki kana kunofambira mberi magetsi mukurima kungamutsawo nyore moto, nounzenza yakakwirira tembiricha, izvo zvakaoma kudzora.
Samarium cobalt magnets a vari haungatani kuputsika. Ndapota chengetedza nomutsa meso enyu, nemimwe uye muviri patinenge navo.
High waivako Motors
The misiyano pakati SmCo magnets a uye Sintered NdFeB magnets A kunyanya zvinosanganisira zvinotevera:
1. Magnetic simba
Neodymium zvachose magineti ane simba kupfuura SmCo magineti mu rinobva simba.
(Bh) Max pamusoro sintered NdFeB zviri 53MGOe, nepo (bh) Max pamusoro SmCo zvinhu ndiye 32MGOe.
SmCo zvinhu hwakasimba pakuramba demagnetization pane NdFeb zvinhu.
2. High tembiricha nemishonga
NdFeB haasi mukuru sezvo SmCo zvikuru tembiricha nemishonga. The kunonyanyisa nokushanda tembiricha kuti NdFeB ndiye 200 ℃ uye kuti SmCo zviri 350 ℃.
3. ngura Kuramba
NdFeB magnets a havasi zvakanaka pakuramba oxidation uye ngura. Kazhinji vanofanirwa kudzivirirwa yakanamirwa pamifananidzo kana kunyange Vacuum chiputiriso. Mhando zvinowanzovapo unhani zvinosanganisira zingi, nickel, epoxy uye nevamwe. SmCo magnets a haringapiwi rusting pasina ra.
4. Zvakaita, kubudiswa uye akakokera
NdFeb uye SmCo zvose kusimba zvinhu, saka haagoni kugadzirwa nezvinhu zvavo okurwadzisa kugadzira.
The vakawanda kugadzira nzira iri waya-electrode nokuveza uye nedhaimani vhiri okurwadzisa. Saka producible Zvekare zvimiro zvemhashu zvakaita magnets a ava shoma. Zvakaoma zvitarisiko havasi shandika. Tichishandisa kutaura, SmCo zvinhu zvikuru kusimba uye nyore kuputsa. Naizvozvo, tapota kungwarira zvikuru vanoungana uye kushandisa SmCo magnets a.
A makore mashoma apfuura, mutengo SmCo magnets a kwakanga kaviri kana kupfuura kuti NdFeB magnets a.
Mumakore achangopfuura, mutengo NdFeB amuka zvikuru nokuda Country kwakaita zvinhu matanho zvisingawanzoitiki-pasi mugodhi. Zvikurukuru, zvakafanana NdFeB magnets a vari isingadhuri kupfuura samarium cobalt.
Previous: AlNiCo magnets a
Next: Sintered Neodymium magnets a